Buy Apartment Rent in Dagon (ID-249) (800,000Ks) in ဒဂုံ on ipivi.com
Apartment Rent in Dagon (ID-249)
1500 sqft apartment for rent in Dagon Township. Near can go Boyoke Aung San Market and Park Royal Hotel. Apartment has Living-room, Three Bed-rooms, Kitchen and Bath-room. Apartment with four air-conditioners and phone line.
Asking price - 8 Lakhs (Nego)
ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးနှင့် Park Royal ဟိုတယ်များသို့သွားရောက်ရန်နီးသည့်နေရာတွင်တည်ရှိသည့် ၁၅၀၀စတုရန်းပေအကျယ်ရှိသော ငှားရန်တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်း သုံးခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လေအေးပေးစက် လေးလုံးနှင့် ဖုန်းလိုင်းများတပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။ တိုက်ခန်း၏လစဉ်ငှားရမ်းခဈေးနှုန်းမှာ - ၈သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
အမည်: Apartment Rent in Dagon (ID-249)